Bit By Bit - အပြေးစမ်းသပ်ချက် - 4.6 အကြံဉာဏ်
သင်ကသင့်ကိုယ်သင်အကျင့်ကိုကျင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်မိတ်ဖက်အတူလုပ်ကိုင်နေကြပဲဖြစ်ဖြစ်, ငါငါ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အတွက်အထူးသဖြင့်ထောကျအကူပွုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ကြောင်းအကြံဉာဏ်ကိုနှစ်ယောက်အပိုင်းပိုင်းဆက်ကပ်ချင်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာမည်သည့်ဒေတာစုဆောင်းခဲ့မီကတတ်နိုင်သမျှစဉ်းစားပါ။ ဒီအကြံပေးချက်ကိုဖြစ်နိုင်စမ်​​းသပ်ချက်အပြေးလေ့ရှိသောသုတေသီများမှသိသာပုံရသည်, သို့သော် (အခန်း2ကိုကြည့်ပါ) ကြီးတဲ့ဒေတာကိုသတင်းရပ်ကွက်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်လေ့ရှိသောသုတေသီများအဘို့အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ကြီးမားတဲ့ data တွေကိုသတင်းရပ်ကွက်အားဖြင့်သင်တို့ကိုဒေတာများအပြီးအလုပ်၏အများဆုံးဖြစ်ပျက်, ဒါပေမယ့်စမ်းသပ်ချက်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်၏ သငျသညျဒေတာစုဆောင်းရှေ့တော်၌ထိုအလုပ်၏အများဆုံးဖြစ်ပျက်သငျ့သညျ။ သင့်ရဲ့ဒီဇိုင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအကြောင်းကိုဂရုတစိုက်စဉ်းစားရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတင်းဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း One ကိုသင်၏စမ်းသပ်မှုတစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအစီအစဉ်ကိုဖန်တီးမှတ်ပုံတင်ရန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, စမ်းသပ်အချက်အလက်များ၏သုံးသပ်ချက်အဘို့အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များတို့သည်လည်းအစီရင်ခံလမ်းညွှန်ချက်သို့တရားဝင်ခဲ့ကြနှင့်, ဤလမ်းညွှန်ချက်သည်သင်၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအစီအစဉ်ကိုဖန်တီးသောအခါစတင်ရန်အလွန်ကြီးစွာသောနေရာ (Schulz et al. 2010; Gerber et al. 2014; Simmons, Nelson, and Simonsohn 2011) ။
အကွံဉာဏျ၏ဒုတိယအပိုင်းအစအဘယ်သူမျှမစမ်းသပ်မှုစုံလင်ခြင်းရှိသွား၏, အကြောင်း၏, သငျသညျအသီးအသီးအခြားအားဖြည့်ကြောင်းစမ်းသပ်ချက်တစ်ခုစီးရီးဒီဇိုင်းဖို့ကြိုးစားသင့်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ ငါပင်ဤအရာ armada မဟာဗျူဟာအဖြစ်ဖော်ပြကြားဖူးတယ်; အစားတစျအကြီးအကျယ်တိုက်ဆောက်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေထက်, သင်ဖြည့်စွတ်အားသာချက်နှင့်အတူပိုမိုသေးငယ်တဲ့သင်္ဘောပိုကောင်းအဆောက်အဦတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Multi-စမ်းသပ်မှုလေ့လာမှုများဤမျိုးစိတ်ပညာလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမဲ့သူတို့တခြားနေရာရှားပါးသောဖြစ်ကြသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, အချို့ဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်များ၏အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ် Multi-စမ်းသပ်မှုလေ့လာမှုများဤကြင်နာလွယ်ကူစေသည်။